Meydka gabadh la afduubtay oo laga helay Homa Bay – The Voice of Northeastern Kenya
Meydka gabadh la afduubtay oo laga helay Homa Bay
Waxaa ismaamulka Homa Bay laga helay meydka gabadh dhiganaysay jaamacadda Rongo oo lala afduubtay wariye ka howlgalo warbaahinta Nation.
Gabadhan ayaa uur lahayd waxayna wararku sheegayaan inuu xiriir jaceyl kala dhexeyay barasaabka ismaamulka Migori Okoth Obado.
Sharon Otieno ayaa dhiganaysay fasalka labaad ee Jaamacadda Rongo waxayna baranaysa culuunta ku saabsan sida loo keydiyo macluumaadka .
Wariayaha oo lagu magacaabo Barack Oduor ayay dhaawacyo soo gareen kadib markii uu iska tuuray baabuur si xowli ah ay ku kaxeynayeen kooxdii afduubatay iyadoo hadda xaaladiisa caafimaad lala tacaalayo.
Sarakiisha dambi baarista ayaa xabsiga u taxaabay gacan yaraha barasaabka Migori , Michael Oyamo.
Waxaa lala xiriiriyay afduubkii loo geystay gabadha meydkeeda la helay iyo wariyaha dhaawaca ah.
Taliyaha waaxda dambi baarista ee ismaamulka Migori ,Benedict Kigen ayaa sheegay in Mr .Oyamo lagu xiray degmada Uriri.
Shalay ayay ahayd markii qaar ka mid ah ururada bulshada , midowga suxufiyiinta Kenyaanka ah iyo golaha warbaahinta dalka ee MCK ay cambareeyeen afduubka lagula kacay wariyaha oo la sheegay inuu warbixino ka diyaarinayay Isfahan waa’ u dhexeyay Mr. Obado iyo gabadha la dilay.
Xoghayaha dhanka warbaahinta u qaabisal guddoomiyaha ismaamulka Migori ,Nicholas Anyuor ayaa sheegay in barasaabka uusan ku lug lahayn afduubkaasi isagoo intaasi ku daray inuu yahay qorsho la doonayo in siyaasad ahaan sumcaddisa lagu dhaawaco.
Taliyaha waaxda dambi baarista ee gobolka Nyanza ,Michael Baraza ayaa sheegay in ciidamada ay dardargelin doonaan baaritaanada si dacwad loogu soo oogo cid waliba oo falkaasi ku lug lahayd.
← Guddiga doorashooyinka ee IEBC oo soo jeediyay in la baaro shahaadooyinka barasaabka Garissa
Golaha amaanka ee qaramada midoobay oo ka shiri doono xaaladda Idlib ee Suuriya →